‘FAAYIDAA OROMOO AKKA HIN SHARAFNETTI, DIINA WALOO KUFFISUU IRRATTI WAL-TAANEE’- JAAL MARROO DIRRIBBAA – AMBO TV
15 Hagayya 2021
”Diina waloo waan qabnuuf, dhimma waraanaa irratti wal deeggaruuf TPLF waliin wal taaneerra,” jechuun ajajaa ol aanaan Waraana Bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa himuu BBC’n Afaan Oromoo gabaasera.
Oromoon TPLF waliin walitti dhufeenya akkami akka qabu ifadha kan jedhu Kumsaan, yeroo TPLF dhaabota kaan waliin tahuun Itoophiyaa bulchaa ture uumanni Oromoo wareegama guddaa kaffalaa akka ture himaniiru.
“Erga wareegama guddaa kaffalee haalicha jijjiree immoo, wareegama sana caalu argamee hin beekne, nameenyaa isaa xiqqeessetu isa mudate. Kanaaf diina waloo qabnu irratti waliin qabsaa’uuf wal tahuuf dirqamne,” jedhan.
Mootummaan Itoophiyaa TPLF fi WBO (kan ABO-Shanee jedhuun) ‘diina Itoophiyaati, biyyattii diiguuf waliin hojjechaa turan’ jechuun irra deddeebiin maqaa baleessa ture. Gareen lamaan dhaabbilee shororkeessitootaati jechuunis paarlaamaan mootummaa federaalaa labseera.
Humnootni TPLF ji’oota sagal darbaniif mootummaa Itoophiyaa waliin waraanatti jiru. WBOn ammoo humna riphee lolaa Lixa Oromiyaa, Kibbaa fi Gidduugaleessa naannichaa keessatti mootummaa lolaa jiru dha.
Waggoota dheeraaf diina walii kan turan TPLF fi WBOn mootummaa Itoophiyaa kuffisuuf gama waraanaan wal tumsuuf waliigaluu fi tumsa gama siyaasaan godhamuuf mariin itti fufee akka jiru mirkaneessaniiru.
Ibsa waa’ee suuraa,Aanga’ootni mootummaa Itoophiyaa Marroo Dirribaa ajjeefamuu himaa erga turan booda Al-jazeeraa irratti mul’ate
Dubbii himtuun ministira mummichaa Billanee Siyyuum, gareewwan lamaan kana ilaalchisee deebii gama imeeliin kennaniin, TPLF fi WBO paarlaamaa biyyattiin shororkeessummaan labsamuu himuun alatti odeeffannoo dabalata akka hin kennine Roobii kaleessaa Rooyitars gabaaseera.
Waamicha karaa nagaan rakkoo furachuu ilaalchisee kan gaafatame Marroon, “karaa gaaffii sabaa fi sab-lammii deebisuu danda’uu fi mirga uummata keenyaa kabachiisuu danda’u taanaan ni simanna,” jedha.
Previous Postበኢትዮጵያ ትግራይና ሱዳን መካከል በወንዝ ውስጥ አስከሬኖች ተገኙ
Next PostAMBO TV